ICasa Aqua: Indlu emangalisayo engaphambili elunxwemeni-iPlaya Venao
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguJulie
Ipropathi ekhethekileyo engaphambili elunxwemeni, iCasa Aqua ihlala ngasekunene kunxweme lwePlaya Venao Bay apho unokonwabela ukusefa, ukuloba, ukubukela iminenga kunye neminye imisebenzi emininzi yangaphandle.
ICasa Aqua likhaya elibanzi kakhulu le-3,500ft elinazo zonke izinto onokuziphupha.
Uya kuthanda ukutya / indawo yokuphumla ngaphandle kwindawo ebanzi egqunyiweyo okanye ukuqubha echibini elikhulu elingenasiphelo. Kwaye ukuba awufuni ukupheka, kukho iindawo zokutyela ezisemgangathweni kufutshane nolwandle olusuka eCasa Aqua.
IZIBONELELO: Yahlula ii-ACs kwigumbi ngalinye, iilinen ezibonelelweyo. I-infinity pool ngqo elunxwemeni, i-terrace enendawo enkulu yokuhlala yangaphandle, izitulo zokuphumla, i-grill yegesi enobungakanani borhwebo, ngaphandle kokutyela abantu abali-10. Izinyuko ezijikelezayo ukuya kwi-balcony yomgangatho we-2 kunye nembono ye-panaoramic ye-bay. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, isikhenkcisi, isikhenkcezisi, iMicrowave, Umatshini wokuhlamba iKofu, umatshini weKofu, ifriji yewayini, umatshini weIce cube, iToaster, umatshini wewaffle, iprosesa yokutya, iblender. UZONWABO: Cable TV, Hi-speed wi-fi, inkqubo Stereo.